At 9/21/2012 09:05:00 PM No comments:
UWSA ဖမ်း SSA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပြန်လွတ်
စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ဝ'ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံထားရသည့် ရှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်း (SSA-S)တပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း အားလုံး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း SSA က ပြောသည်။
At 9/21/2012 09:03:00 PM No comments:
ကချင် တိုင်းရင်းသားတစ်ဦး အနေဖြင့် ကချင်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် မည်သူ့တွင် အဓိက တာဝန်ရှိသည်၊ မည်သည့် အကြောင်းကြောင့် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာနေရသည်ကို စဉ်းစားမိခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်ပါသည်။ မိမိကဲ့သို့ပင် ကချင်ဒေသနေ ပြည်သူများ နိုင်ငံအ၀ှမ်းရှိ တိုင်းရင်းသား များနှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူ အားလုံး စဉ်းစားမိမည် ထင်ပါသည်။ မှားယွင်းသည့် အချက်အလက်များ (Wrong information)၊ လွဲမှားစွာ လက်ခံထားသည့် အယူဝါဒစွဲများ (Ideology deviation)၊ ဆန့်ကျင်ဘက် အတွေးအခေါ်များ (Opposite idea) စသည်တို့ကို အခြေခံသော ရှုမြင်မှုကြောင့် ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေနိုင်ပါသည်။ ရာဇ၀င်သမိုင်းပါ
At 9/21/2012 09:02:00 PM 1 comment:
ကချင်ပြည်နယ် ထိုးစစ်များ ရပ်ဆိုင်းရန် ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့မှာ KNU တောင်းဆို
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ)။ ။ ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲသည့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် ပထမဆုံး ခြေလှမ်းတခုအနေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင် အစိုးရ၏ စစ်ဆင်ရေးများအား ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းရန် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU က စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ၁၁ ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့တွင်တောင်းဆိုလိုက်သည်။
At 9/21/2012 09:01:00 PM No comments:
ဦးသူရရွှေမန်း ကြည့်ရှု့ခံစားတဲ့ ‘The West Wing’ ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ဒီမိုကရေစီ လမ်းညွှန်လား
အမေရိကန် ရုပ်မြင်သံကြား ဇာတ်လမ်းတွဲ ‘The West Wing’ ကို ကြည့်ရှု၍ မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း တချို့သည် ဒီိမိုကရေစီစနစ်တွင် မည်ကဲ့သို့ အုပ်ချုပ်ရမည် ဆိုသည်နှင့် ပတ်သတ်သော အတွေးအမြင် ရရှိခဲ့သည်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် အား ပြောခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း ကလင်တန်၏ သမိုင်းဝင် မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်အတွင်းတွင် ဦးရွှေမန်း က သူ့အား ပြောခဲ့ပုံကို ကလင်တန်က ပြန်လည် ပြောပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
At 9/21/2012 09:00:00 PM No comments:
မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၌ တစိုက်မတ်မတ် လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်သူ ပုဂ္ဂိုလ် ၅ ဦးအား အမေရိကန်အခြေစိုက် NED က 2012 Democracy Award Honorees ဆု ချီးမြင့်ခဲ့ပါသည်။ ဆုကို ယခုလ ၂၀ ရက်က အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်မြို့တော်၌ ပေးအပ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆုပေးပွဲအပြီး ဂုဏ်ပြုညစာ စားပြီးကြစဉ် ဆုရှင်တဦးဖြစ်သော ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ရှိ မယ်တော်ဆေးခန်း တည် ထောင်သူ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်အား သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါသည်။
At 9/21/2012 08:51:00 PM No comments:
မည့်သည့်တပ်ဖွဲ့နှင့်မှ ရန်စတိုက်ခိုက်လိုသည့် ဆန္ဒမရှိဟု RCSS/SSA ပြော
သျှမ်းပြည်တပ်မတော်နှင့် တခြားတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့များ ပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်စဉ်
ငြိမ်းချမ်းရေးတည် ဆောက်သည့်ခေတ်ကာလဖြစ်သဖြင့် တမြေတည်းနေတရေတည်းသောက်လာသည့် ညီအကိုမောင်နှမများအပေါ် သျှမ်းပြည်တပ်မတော်မှ ရန်လိုတိုက်ခိုက်ခြင်း ဆန္ဒလုံးဝ မရှိကြောင်း RCSS/SSA ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူးလောင်ဆိုင်ကပြောသည်။
“ အစီအစဉ်ချပြီး သွားတိုက်တယ်ဆိုတာ လုံးဝ မရှိပါဘူး။ အရင်တုန်းက ရန်သူလို့ သတ်မှတ်တဲ့ မြန်မာ စစ်တပ်နဲ့ တောင်အပစ်ရပ်ခဲ့ပြီးပြီဘဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်တဲ့ကနေ့ခေတ်ကာလမှာ ကျနော်တို့ တမြေတည်းအတူ နေထိုင် လာတဲ့ မောင်နှမသားချင်းတွေ ကို ဘယ်လိုလုပ် သွားတိုက်ခိုက်မှာ လဲ။ ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာအ၀၀ကို
At 9/21/2012 08:48:00 PM No comments:
အမေရိကန်သံအမတ်သေဆုံးခဲ့သည့် လစ်ဗျားတိုက်ခိုက်မှု ဘင်လာဒင်၏ဒရိုင်ဗာနှင့်ဆက်နွယ်ဟုဆို
လစ်ဗျားနိုင်ငံတွင် အမေရိကန် သံအမတ် သေဆုံးသည်အ ထိ ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု သည် အိုစမာ ဘင်လာဒင်၏ ဒရိုင်ဗာနှင့် ဆက်နွယ်နေကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ တမန်တော် မိုဟာမက်ကို စော်ကားထားသည့် အမေရိကန် ဗီဒီယို ဇာတ်လမ်းတို တစ်ခုကို ကန့်ကွက်သည်ဟု အကြောင်းပြကာ အမေရိကန် သံအမတ်ကို ဘန်ဟာဇီမြို့တွင် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် လစ်ဗျားအုံကြွမှု ကို နောက်ကွယ်မှ သွေးထိုးပေးသူသည် ဘင်လာဒင်၏ ဒရိုင်ဗာအဖြစ်
At 9/21/2012 08:43:00 PM No comments:
တရုတ်နိုင်ငံမှ အမျိုးသမီး တစ်ဦးသည် ဆင်တစ်ကောင်၏ ခြေထောက် အရွယ်မျှ ကြီးမားလာသည့် သူမ၏ ခြေထောက်ကို ကုသမှုခံယူရန် ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြတ်တောက်ပစ်ရန် စဉ်းစားနေ
တရုတ်နိုင်ငံမှ အမျိုးသမီး တစ်ဦးသည် ဆင်တစ်ကောင်၏ ခြေထောက် အရွယ်မျှ ကြီးမားလာသည့် သူမ၏ ခြေထောက်ကို ကုသမှုခံယူရန် ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြတ်တောက်ပစ်ရန် စဉ်းစားနေကြောင်း သိရသည်။ လူဆောသည် ခြေထောက်တွင် ပြန်ရည်ကြော အဖွဲ့အစည်း ပြဿနာကြောင့်ရောင်ကိုင်းကြီးထွားလာ မှုနှင့် ကြုံနေရသည်။ လူသည် လွန်ခဲ့သည့် (၅)နှစ်က သူမ၏ ပထမဆုံး ကလေးကို ဖွားမြင်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုပြဿနာ
At 9/21/2012 08:40:00 PM No comments:
လူမျိုးရေးခွဲခြားခံရမှုကြောင့် Twitter အသုံးပြုခြင်းကို မီခေးလ် ရပ်ဆိုင်းမည်
အသင်းပရိသတ်များ၏ လူမျိုးရေး ခွဲခြားတိုက်ခိုက် ခံရသည့် Messageများကြောင့် Twitter အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် ချယ်လ်ဆီး ကွင်းလယ်လူ ဂျွန်အိုဘီ မီခေးလ်က ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ မီခေးလ်သည် ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်အဖြစ် အိမ်ကွင်းတွင် ဂျူဗင်းတပ်စ်အား ရင်ဆိုင် ကစားစဉ် အမှားတစ်ခုကြောင့် အနိုင်ရလဒ်ကို လက်လွှတ်ရစေမည့် ချေပဂိုးကို ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်များက Twitterမှတစ်ဆင့် မီခေးလ်ကို တိုက်ခိုက်ဝေဖန်ခဲ့ကြသလို လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုများပါ ပြုလုပ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
At 9/21/2012 08:38:00 PM No comments:
အန်ဒဲဗား (Endeavour) အာကာသလွန်းပျံယာဉ်၏ အာကာသခရီးစဉ်များ ရပ်နားလိုက်ပြီးနောက် အများပြည်သူ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့ရှိ California Science Center တွင် ပြသထားရှိသွားမည်ဖြစ်ရာ ကနေဒီအာကာသစခန်းမှ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်သို့ ၃ ရက်ကြာခရီးနှင်လာသော အန်ဒဲဗားနှင့် ၎င်းအားသယ်ဆောင်လာသော လေယာဉ်ကို တွေ့ရသည်။
At 9/21/2012 08:37:00 PM No comments:
အိန္ဒိယ နိုင်ငံသည် သောကြာနေ့က နျူကလီးယား ထိပ်ဖူး တပ်ဆင်နိုင်သည့် Agni-III ဒုံးကျည်ကို စမ်းသပ် ပစ်လွှတ်
အိန္ဒိယ နိုင်ငံသည် သောကြာနေ့က နျူကလီးယား ထိပ်ဖူး တပ်ဆင်နိုင်သည့် Agni-III ဒုံးကျည်ကို စမ်းသပ် ပစ်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အိုဒီရှာ ကမ်းလွန်ရှိ ကျွန်းတစ်ကျွန်းမှ ပစ်လွှတ်ခဲ့သည့် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်သည် မြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ် အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ထိုဒုံးကျည်သည် အကွာအဝေး ကီလိုမီတာ (၃၀၀၀)မှ ပစ်မှတ်ကို ဖျက်ဆီးနိုင်ပြီး (၁.၅)တန် အလေးချိန်ရှိသည့် နျူကလီးယား ထိပ်ဖူးကို သယ်ယူနိုင်သည်။
At 9/21/2012 08:34:00 PM No comments:
၁၄ နှစ်သမီးလေး သေရရှာပြီ။
At 9/21/2012 08:31:00 PM No comments:
ကရင်ပြည်နယ်က ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အခမ်းအနား
မြ၀တီမြို့ပြင်တွင် ကျင်းပသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံများ - ဧရာဝတီ)
မြ၀တီမြို့နယ် ချောင်းဆုံရွာတွင် ယနေ့ ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အစီအစဉ်ကို ရန်ကုန်မြို့နှင့် မတူခြားနားစွာ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
At 9/21/2012 06:27:00 PM No comments:
At 9/21/2012 06:23:00 PM No comments:
ယနေ့ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်သည့် ခေါင်းဆောင်များကို တရားဥပဒေအရ အေ၇းယူသွားမည်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းနေ့ လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ရန်ကုန်မြို့တွင်း စုပေါင်း လမ်းလျှောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းသည် ခွင့်ပြုချက်နှင့် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်သည့်အတွက် ဦးဆောင်
ပြုလုပ်သူများကို တရားဥပဒေအရ အရေးယူသွားမည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး ဦးစီး(၂)မှ ရဲမှူးမြင့်ထွေးက ယနေ့ ညနေ ၅ နာရီအချိန်တွင် သတင်းထောက်များကို ပြောကြားလိုက်သည်။
At 9/21/2012 06:22:00 PM No comments:
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် ယနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့သော စီတန်းလှည့်လည်မှုများ ပြီးဆုံးချိန်တွင် ကြေညာချက် ငါးချက် ထုတ်ပြန်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် ယနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့သော စီတန်းလှည့်လည်မှုများ ပြီးဆုံးချိန်တွင် ကြေညာချက် ငါးချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ
၁။တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စစ်ပွဲများချွင်းချက်မရှိ ရပ်တန့်ရန်။
At 9/21/2012 06:16:00 PM No comments:
မေဇွန် ကိစ္စ ကြေးမုံဖော်ပြမှု ဒု ၀န်ကြီး ဖြေရှင်းချက်တောင်း
မကြာသေးမီက လူအများ စိတ်ဝင်စားမှု အရှိဆုံး သတင်းတခုဖြစ်တဲ့ အိမ်ဖော် မိန်းကလေး တဦး သေဆုံး မှု ဖြစ်ရာမှ မူလ က လူသေမှုအဖြစ်ကနေ လူသတ်မှုနဲ့ MRTV4 ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ဖို့ ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ မေဇွန် ခေါ် မျိုးဇာနည်ဇွန် ဆိုတဲ့ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတယောက်ကို ရဲက တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို သတိထားမိ ကြလိမ့်မယ်။
At 9/21/2012 06:13:00 PM No comments:
အမေရိကန် မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေးဌာန မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးမည်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အမေရိကန်အစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီများကို အကြံပြု ပုံဖော်လေ့ရှိသော မဟာဗျူဟာနှင့် နိုင်ငံတကာ လေ့လာရေးဌာန CSIS က မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဆင့်မြင့် ကွန်ဖရင့်တရပ် ခေါ်ဆို ဆွေးနွေးသွားမည်ဟု သိရသည်။
At 9/21/2012 02:51:00 PM No comments:
ရှေ့လထွက်ရှိမည့် ကျပ်တစ်သိန်းကျော်တန် 800 MHz ဖုန်းသတင်းအား ဆက်သွယ်ရေးအတည်မပြု
CDMA 800 MHz ဖုန်းများအား ငွေကျပ်တစ်သိန်းကျော်ဖြင့် ရောင်းချပေးဟုဆိုသည့် သတင်းမှာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရောင်းချခွင့် မပေးကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက သိရှိရသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း (MEC) ကုမ္ပဏီမှ လာမည့်လ၌ ကျပ် တစ်သိန်း သုံးသောင်းတန် CDMA 800 MHz ဖုန်းများ ရောင်းချပေးမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေကြောင်း ဖုန်းဈေးကွက်မှသိရသည်။
At 9/21/2012 02:40:00 PM No comments:
At 9/21/2012 02:37:00 PM No comments:
At 9/21/2012 02:25:00 PM No comments:
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် ၀ရမ်းပြေး တစ်ဦးအား အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီး အရေးယူ နိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် တည်ငြိမ်မူ ပျက်ပြားနေကြောင်း သိရသည်။
At 9/21/2012 02:21:00 PM No comments:
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ - ၂၁
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့နှင့်အခြားအချက်အခြာကျသောမြို့များ၌ မြေဈေးများကြီးမြင့်နေခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်ဟု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကပြောကြားကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် နေးရှင်း သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။
At 9/21/2012 02:07:00 PM No comments:
မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာစာ ဖြောင့်အောင်မရေးနိုင်ကြတာ ဘာကြောင့်လဲ
"ခေါင်နှင့်တူသော စာနယ်ဇင်းမီဒီယာများကပါ မြန်မာစာ ဖြောင့်အောင် မရေးနိုင်သော အားနည်းချက်တွေ ရှိပါက ကြမ်းပြင်နှင့်တူသော စာဖတ်ပရိသတ်တို့ကြားတွင် ထင်သလို ရေးနေကြသည်မှာ အံ့အားသင့်စရာ မဟုတ်တော့ပါ"
At 9/21/2012 12:48:00 PM No comments:
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၁ ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားဈေးအနီးရှိ အောက်ရုံ သမ္ဗန်ဆိပ်တွင် စက်တင်ဘာလ ၂၀ရက်နေ့ ညနေ ၃နာရီ ၁၅မိနစ်ခန့်က အောက်ရုံ သို့ သွားရောက်မည့် ခရီးသည် ခြောက်ဦးတင်ဆောင်ထားသည့် သမ္ဗန်တစ်စီးနစ်မြုပ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ကြည့်မြင်တိုင်- အောက်ရုံ သမ္ဗန်ဆိပ် မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
At 9/21/2012 12:46:00 PM No comments:
အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားနှင်.မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန် တို.ရှေ.အပတ် ကုလညီလာခံတက်ရောက်မည်ဖြစ်သော်လည်း တွေ.ဆုံရန်အစီအစဉ်မရှိ
ရှေ.အပတ် နယူးယာက်တွင်ပြုလုပ်မည်. ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံကိုအမေရိကန် သမ္မတဘားရက် အိုဘားမားနှင်. မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန် တို.တက်ရောက်ကြမ ည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ၄င်းတို.နှစ်ဦးတွေ.ဆုံနိုင်ရန်အလားလာမရှိဟု သိရသည်။
At 9/21/2012 12:44:00 PM No comments:
၉၀ ပြည့်နှစ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ နစ်နာကြေးတောင်းကြမယ်
ဦးပီတာလင်းပင် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူများ ရွေးကောက်လိုက်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အများအပြားက သမ္မတထံတွင် နစ်နာကြေး တောင်းဆိုရန် စီစဉ်နေကြသည်။
၉၀ ပြည့်နှစ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထဲမှ ထောင်အတွင်း ၌ သေဆုံးခဲ့ရသူများ၊ လက်ရှိကျန်းမာရေးချို့ယွင်းပြီး စားဝတ်နေရေး ဒုက္ခ ရောက်နေကြသူများအတွက် အဖွဲ့ တခု ဖွဲ့စည်းကာ တောင်းဆိုမည်ဟု သိရသည်။
At 9/21/2012 12:35:00 PM No comments:
လယ်သမားများအရေး ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ တောင်ကုတ်မြို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မြို့နယ် ညီလာခံကျင်းပရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးချစ်မောင်က “ကျနော်တို့ တောင်ကုတ်မြို့နယ်မှာ စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးတဲ့အခါမှာ ငွေဖြတ်ယူတာတွေ ရှိတော့ မကျေနပ်လို့
At 9/21/2012 12:07:00 PM No comments:
စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်က United States Institute of Peace တွင် စကားပြောနေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
At 9/21/2012 12:06:00 PM No comments:
မြန်မာအပေါ် ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ ကန့်သတ်မှု ဖြေလျှော့ရေး အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော် ထောက်ခံ
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ ကန့်သတ်ထားမှု ဖြေလျှော့ပေးရေး ဥပဒေမူကြမ်းကို အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်က စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ထောက်ခံခဲ့ပါသည်။
အောက်လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်သည့် အဆိုပါဥပဒေကြမ်းအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) နှင့် နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) တို့မှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ဘဏ္ဍာရေး အကူအညီ ပေးနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါဥပဒေကြမ်းအနေဖြင့် အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်ကို ရယူရဦးမည်ဖြစ်သည်။
At 9/21/2012 12:05:00 PM No comments:
ဖမ်းဆီးခံထားရသော ရုရှားပန့်တေးဂီတအဖွဲ့ဝင်များကို လွှတ်ပေးရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တိုက်တွန်း
ဝါရှင်တန်ဒီစီ၊ စက်တင်ဘာ - ၂၀ ရုရှားနိုင်ငံတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသော Pussy Riot အမည်ရ ပန့်ရော့ခ်တေးဂီတအဖွဲ့ဝင်များကို လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မော်စကိုအစိုးရအား တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ကြောင်း NBC သတင်းဌာနက တင်ဆက်ဖော်ပြသွားသည်။
At 9/21/2012 11:57:00 AM No comments:
ကျောက်တော်မြို့တွင် လူသတ်မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးထားသော ဘင်္ဂလီနှစ်ဦး၂၁ ရက်နေ့ည ၁း၃၀ ခန့်အချိန် တွင် ကျောက်တော် ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းမှ ဖောက် ထွက် လွတ်မြောက်သွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ထိုသို့ ဖောက်ထွက် သွားခြင်း မှာ ပုဆိုးကိုသံတိုင်အားလိမ်ကာ ထွက်သွား ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။
ထိုသူတို့သည် မကြာသေးမီက သရက်အုပ်ကျေးရွာမှာ ဦးကျော်မောင်ချေ အားသတ်ဖြတ်ခဲ့သော တရားခံများဖြစ်ပြီး ရဲစခန်းတွင် ၀န်ခံထွက်ဆို ထား သူများလည်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။
At 9/21/2012 10:49:00 AM No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်ဆုတောင်းပွဲ ဟန့်တားကန့်သတ်ခံနေရ
ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အတွက် လှုပ်ရှားမှု ရန်ကုန်တွင်း ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်စောစောကတည်းက ကန့်သတ်မှု၊ ဖိအားပေး ခြိမ်းခြောက်မှုများ ဖြစ်နေပါတယ်။
ယနေ့ နံနက် ၃ နာရီက နေပြည်တော်ကို ထွက်ခွာဖို့ စုရပ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ မြေနီကုန်းရှိ ဒဂုံစင်တာအနီး မှာ နေပြည်တော် ကို ထွက်ခွာကြမယ့် ကားတွေနဲ့ ကားမောင်းသူတွေကို ဖိအားပေးခဲ့တဲ့အတွက် လိုက်ပါကြမ ယ့် ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ သတင်းထောက်တွေကို ထားရစ်ပြီး အစီအစဉ်ပျက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
At 9/21/2012 10:46:00 AM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အမေရိကန်တွင်နေထိုင်သော သားကြီးဖြစ်သူ က ခုချိန်ထိ လာရောက်မတွေ့ဆုံသေး
အမေရိကန် ဝါရှင်တန်ပြည်နယ် ကမီရှက်တဲလ် မြို့တွင် တစ်ဦးတည်းနေထိုင်လျက်ရှိ ၊ ၃၉ နှစ် Buddhist ၊ လူအများနှင့် ရောနှောခြင်း သိပ်မရှိလှ ဟုသိရ ၊ ကိုမြင့်ဆန်းအောင်
At 9/21/2012 10:36:00 AM No comments:
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် သုဓမ္မာလမ်း ပေါ်တွင် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ည ၉နာရီ ၃၀မိနစ်တွင် သားအမိနှစ်ဦးအား တိုက်မိခဲ့သော ယာဉ်မောင်းနှင့် မော်တော်ယာဉ်အားအား ၁၀ရက်ကြာသည် အထိ ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ယင်းအမျိုးသမီး၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးစိန်ထွန်းက The Voice Weekly သို့ပြောကြားသည်။
At 9/21/2012 10:28:00 AM No comments:
At 9/21/2012 10:23:00 AM No comments:
ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ် ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွား
ယနေ့ ည ၁၀နာရီခွဲခန့် က ကျောက်တံတားမြို့ နယ်၊ဆူးလေ ဘုရားလမ်း နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်းထောင့်၊ ဆာကူရာတာဝါအနီးတွင် စီးတီး တက္က စီ တစ်စီးနှင့် surf အမျိုးအစားကိုယ်ပိုင် ယာဉ်တစ်စီး တို့ တိုက် မိခဲ့ရာ တက္က စီ ယာဉ်မှာပျက်စီး ရှေ့ ဦးပိုင်းပျက်စီးခဲ့ပြီး
ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မှာ တက္ကစီ ယာဉ်အားတိုက်မိ ပြီးနောက် အရှိန် ဖြင့် ဆာကူရာတာဝါ အဆောက်အဦးအားထပ်မံဝင်ရောက် တိုက်မိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
At 9/21/2012 10:15:00 AM No comments:
ပဉ္စမံတပ်သား။ အရေးကိစ္စတစ်ခုကို အများအကျိုးအတွက် အများစုပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရာမှာ သူ့လူကိုယ့်ဘက်သားလုပ်ပြီး ၀င်ရောက်ဖျက်ဆီးတဲ့လူကို ခေါ်တယ်။ သူ့လူကိုယ့်ဘက်သားဆိုတဲ့ စကားကသဘောမိတယ်။ လူကတော့သူ့လူပဲ၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘက်မှာ နေတယ်။ ကိုယ့်လူဟန်ဆောင်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ မသိအောင် ကပျက်ယဖျက် လုပ်တယ်။ အနှောင့်အယှက်ပေးတယ်။ နောက်ဆုံး လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကို လုပ်မရအောင် ဖျက်ဆီးတယ်။
At 9/21/2012 09:35:00 AM No comments:
At 9/21/2012 09:33:00 AM No comments:
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ယက်မှ အဖွဲ့ဝင် ၁၀၀ ကျော်ခန့် ရန်ကုန်မြို့တွင် စုဝေးနေ
At 9/21/2012 08:38:00 AM No comments:
မျက်စိ ကျန်းမာရေးအတွက် ပြုလုပ်သင့်သည့် အချက် ၉ ချက်
ကန်စွန်းဥမှာ ညဘက် အမြင်အာရုံ အားကောင်းစေတဲ့ ဗီတာမင်အေများစွာ ပါဝင်ပြီး မုန်လာဥ (Beetroot) မှ ပါဝင်တဲ့ Anthocyanin တွေဟာ မျက်စိမှ သွေးကြောငယ်တွေ သွေးယိုစိမ့်မှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက် Retinopathy (မျက်စိ မမြင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခု) မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
At 9/21/2012 08:32:00 AM No comments:
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၀ရက်က လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေသည့် နေရာကို ဒေသခံများ သွားရောက် တားမြစ်ဆန္ဒပြနေစဉ်။
At 9/21/2012 08:29:00 AM No comments:
At 9/21/2012 08:28:00 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းသာယာမှု ရရှိစေဖို့အတွက် တိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာ အပြန်အလှန် နားလည်မှုနဲ့ အပြန်အလှန် လေးစားမှု ရှိကြရမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာ ရှိတဲ့ American University အမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသား မိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲမှာ အဲဒီလို ပြောကြားလိုက်တာပါ။
At 9/21/2012 08:27:00 AM No comments:
ဒေါ်စုနဲ့ ဒီစီတဝိုက် မြန်မာမိသားစု တွေ့ဆုံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒီစီတဝိုက်က မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံစဉ်။ (စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂။) ဓာတ်ပုံ/သိန်းထိုက်ဦး (ဗွီအိုအေ-မြန်မာဌာန)
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဝါရှင်တန်ဒီစီ မြို့တော် တဝိုက်က မြန်မာ မိသားစုတွေဟာ ဝါရှင်တန် ဒီစီမှာ ရှိတဲ့ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှာ အမေရိကန်စံတော်ချိန် ၉ နာရီ ကနေ ၁၀ နာရီခွဲအထိ မိနစ် ၉၀ ကြာလောက် တွေ့ဆုံခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲအကြောင်း ကိုတော့ တွေ့ဆုံပွဲကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက်သတင်းယူနေတဲ့ ဗွီအိုအေ ဝိုင်းတော်သား ဦးသိန်းထိုက်ဦးကို မခင်ဖြူထွေးက အသံလွှင့်ခန်းကနေ တိုက်ရိုက် မေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်။
At 9/21/2012 08:25:00 AM No comments:
တရုတ်နိုင်ငံက ဥရောပယူရိုငွေကြေး အကြပ်အတည်း ပြဿနာကို ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ ဆက်ပြီး လုပ်နေပေမယ့် EU အီးယူ ဥရောပ သမဂ္ဂက တရုတ်နိုင်ငံအတွက် လက်နက် မရောင်းဖို့ အရင်ကတည်းက တားမြစ်ထားတာကို အခုထိ ဖျက်သိမ်းမပေးသေးဘူးလို့ တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင် (Wen Jiabao) က ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
At 9/21/2012 08:23:00 AM No comments:
ဝီကီလိခ်စ်ကို တည်ထောင်သူ အငြင်းပွားဖွယ် ပုဂ္ဂိုလ် ဂျူလီယန် အက်ဆန်ကို ဆစ်ဒနီ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖောင်ဒေးရှင်းက ရွှေတံဆိပ်ဆု ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ “လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ရဲရင့်စွာ လုပ်ဆောင်မှု” ကြောင့် ဆုချီးမြှင့်တာလို့ သိရပါတယ်။
အက်ဆန်းက ဆုကို လန်ဒန်ရှိ ဖရွန့်လိုင်း ကလပ်မှာ အကျဉ်းသဘောလောက်ပဲ ဆုလက်ခံပွဲ ကျင်းပပါတယ်။ အက်ဆန်းဟာ လောလောဆယ်မှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ခရီးသွားလာခွင့် ကန့်သတ်ချက် ခြေချုပ်နဲ့ နေနေရပါတယ်။ အက်ဆန်ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှုနဲ့ ထိမ်းသိမ်းခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
At 9/21/2012 08:21:00 AM No comments:
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို တရုတ်နိုင်ငံက ဒေါက်တာဘွဲ့ အပ်နှင်း
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို မသွားမီ ၃ ရက်တာ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တော တက္ကသိုလ်တခုက ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ကို ပေးအပ် ချီးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။
At 9/21/2012 08:20:00 AM No comments: